I-Biography ye-Ellen DeGeneres
Ubomi be-Comedian and Talk Show Host eyaziwa ngokuba ngu "Ellen"
U-Ellen DeGeneres (owazalwa ngoJanuwari 26, 1958) udla ngokubizwa ngokuba ngu "Ellen." Umculi we-comedian waphendukela kumdlali we-actress, ngoko-ntetho ye-daytime host host yenza izigidi zihleka ngenxa yokuphumelela komsebenzi wakhe, ngenxa yecandelo likaJohnny Carson.
Phakathi kweempumelelo zakhe ezininzi, uDeGeneres mhlawumbi uyaziwa ngokuza kwakhe njengomlingani wesibini ekupheleni kweminyaka engama-90. Umntu wakhe kwi-sitcom "uEllen" wayengowokuqala ukumanga omnye umfazi kwixesha eliqaqambileyo kunye nomtshato wakhe ku-Portia de Rossi uye wavakaliswa kakuhle.
Ngaphandle kokuhlaziya kunye nobomi bakhe, u-Ellen uhlonishwa ngokunyamekela kwakhe kunye nokukhuthazwa kwemicimbi kunye nabantu abanokulibalelwa ngenye indlela.
Ellen's Early Years
UDeGeneres wazalelwa eJefferson, uLouisana. Ungomncinci wabantakwabo ababini ozelwe ngu-Elliot noBetty DeGeneres. Umntakwabo, uVance, ungumlobi weqhinga kwaye wayengumbonisi kwi " Daily Show" ukusuka ngo-1999 ukuya ku-2001.
U-Ellen wayenobuntwana obuqhelekileyo, wakhuliswa eNew Orleans naseAtlanta, eTexas. Abazali bakhe bahlukanisa ngoxa wayeselula. Waphumelela kwi-Atlanta High School waza wabuyela eLouanaana, apho aye khona kwiYunivesithi yaseNew Orleans. U-Ellen uzukisiwe kwizonxibelelwano kodwa washiya emva kwesinye semester.
U-Ellen wenza umsebenzi wobhala kwi-firm firm, elandelwa ngumtya wemisebenzi: ivenkile yokusebenza, iitafile zokulinda, ukudweba indlu, ukukhwabanisa, nokukhusela ii-oysters. Wada wathengisa u-Hoover umcoco wokucoca ngendlu ngendlu, umsebenzi ayewugubungela ngawo uWillie Nelson - naye owayengumthengisi wokungcola wendlu ngendlu.
Waqala ukuhlaziya kwiClyde's Comedy Club. Ngelo xesha, bekuphela kweqela lokuhlaziya i-comedy e-New Orleans kwaye waphumelela kwi-comic ukuya kwi-emcee. Oku kwakhokelela kwimiboniso engakumbi eMzantsi kwaye kungekudala ilizwe.
U-Ellen wathandana nala mazwe, ehlonipha ixesha kunye nezobugcisa. Ngowe-1982, wakhethwa ngu-Showtime ngokuthi "uMntu oMnandi kakhulu eMelika." Oku kwakhokelela kwinqaku le-cable kunye nobusuku bobusuku bobusuku obubonakalayo, kubandakanywa nesibhozo kwi " Tonight Show " ngo-1986.
Uguqule ukusuka kumhlaziyili ukuya kwikota ye-sitcom ngempumelelo ye "Ellen." I-quirky show, ngokusekelwe kwi-comedy stand-up, yafaniswa "neSeinfeld" kumaxesha ayo okuqala ambalwa.
U-Ellen, iNgcaciso yeHlabathi yeNtetho
Ngo-2003, u-Ellen uqalise umboniso wakhe wentetho yomhla " I-Ellen DeGeneres Show ." Intsha intetho ibonisa isivuno salo nyaka, kodwa "u-Ellen" wenyuka waya phezulu kwaye ube ngumgca wokubonisa ukusukela njalo. Kwiminyango eninzi, u-Oprah Winfrey wahlala phakathi kweentandokazi xa ama sibini ehambelana ngokufanayo.
U-Ellen unikeze umzuzu ukubonisa ukutyikitya kwakhe ukutyikitya-intliziyo ephilileyo, engakhathazekiyo eyenzela abaphulaphuli bayo ukuba bayalibale iingxaki zabo kwaye bayakuzonwabisa nencoko. Ubonisa amanqaku ngamnye ngomdaniso kunye nemibulelo emininzi ekupheleni, ngokufuthi ukufumana abaphulaphuli bakhe bathathe inxaxheba kulo msebenzi.
Umzuzu oKhethekileyo kwiNkqubo yakhe
Ngaphandle kweenguqu zayo eziyimpumelelo ukusuka kwi-stand-up comic ukuya kumboniso wokubonisa , kukho izihlandlo ezimbini ezibalulekileyo kwi-DeGeneres 'career.
Eyokuqala yayikubonakala kwakhe kwi " Tonight Show " ngo-1986. Emva kokumisa kwakhe, uJohnny Carson wammema ukuba ahlale kufuphi naye. Lo ngumqondiso wendabuko kubo bobabini abahlaziyi kunye noshishino lokuzonwabisa uJohnny wacinga ukuba lo mntu uyinto ekhethekileyo. U-Ellen wayengowokuqala umhlaziyizidizi ukuba amenywe ngaphaya kwaye athathe uzuko.
Okwesibini xa wayememezela esidlangalaleni ubungqingili bakhe. Wenza njalo "kwi-Oprah Winfrey Show" kunye nakwi "Puppy episode" ye-sitcom, "uEllen." Oku kwakuquka ukumangalisa okwangoku phakathi komlingiswa wakhe, uEllen, kunye nomdlali odlalwa nguLaura Dern. Ukuphuma kuka-Ellen kwakungomnye wamabali aphezulu ka-1997 kwaye wenza "u-Ellen" umboniso wokuqala wesikhathi sokuqala kunye nomlingisi okhokelayo obala.
U-Ellen utshatile u-Portia de Rossi umlingisi wase-Australia - owaziwa kakhulu kwimiboniso yeTV, "UkuThuthukiswa koPhuhliso" - ngo-Agasti 16, 2008. Le yinyanga nje emva kokuba iNkundla ePhakamileyo yaseCalifornia ishintshe umtshato wesini.
Ngo-2010, isibini siphumelele sicele ukuba u-de Rossi athathe igama likaDeGeneres. Igama lakhe elisemthethweni ngoku li-Portia Lee James DeGeneres.
Unina ka-Ellen, uBetty, ungomnye wabancedisi bakhe abanamandla kunabo bonke kunye nelungu elisebenzayo le-PFLAG (Abazali, Abahlobo, kunye neNtsapho yamaLesbi kunye neeGay).
U-Ellen wadlala ilizwi likaDory kwiDisney noPixar " Ukufumana iNemo " kunye nokulandelelana "Ukufumana iDory." Le nxaxheba idlala indima enkulu ekuvuseleleni umsebenzi wakhe.
U-Ellen wafumana iziphakamiso ezimileyo zokukhwela kwakhe, ithoni kunye nokuphakamisa ubuntu xa ebamba ama-Emmy Awards emva kokuhlaselwa kuka-Septemba 11 ngo-2001. U-Degeneres wabuyela njengomncedisi ngo-2005, wafumana ama-Award Academy ngo-2007 kwakhona ngo-2014.
Kule minyaka, u-Ellen ufumene amaxabiso amaninzi, kuquka u-Emmy omnxeba we "Exhibition Talk Show."
Ngo-2010, uDeGeneres waqalisa ireyileleven ilere yereyibhile. Inkampani yenzelwe ukukhuthaza izenzo zomculo ezinetalente ezingenakunyuswa ngamabhalana amakhulu.
UDeGeneres wanikezelwa nguMongameli kaMongameli wenkululeko ngo-2016 nguMongameli uBarack Obama.
Apho Intetho Intetho Ebonisa Intetho Yaya kwiSikolo esiphakeme
I-Egg Whites njengoMbane wokuTshisa? Hayi
I-Magical Moon Garden
Inani lokuxolelwa nguMongameli
I-Karabiner 98k: I-Wehrmacht's Rifle
Indlela yokuqhubeka udibanisa nabahlobo bakho beZikolo eziPhakamileyo
Uthelekiso kunye neziNgcono
I-Simpsons Isiqendu sokuHlola: uLisa weVivearianarian (Isikhathi se-7, isiqendu 5)
Funda iJapan igama elithi Renraku
Imbali yoSuku lukaValentine
Ngaba Intombikazi kaMariya Yafa Ngaphambi Kokuthathwa Kwakhe?
I-Top 10 Zac Brown Band Iingoma
I-Yongle Emperor Zhu Di
Ukuphononongwa: i-Yokohama Avid Ascend